Ndịàmà Jehova​—⁠Ihe Ndị Mere n’Ebe Dị Iche Iche n’Ụwa | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2014
Ndị Uwe Ojii Nyere Aka Butuo Blọk
Na Jọjia, ụmụnna na-aga mgbakọ n’otu ụlọ ọrụ kara nká dị n’otu obodo a na-akpọ Kutaịsi kemgbe afọ iri na atọ. Ha na-eji wọtapruf ekpuchi elu ụlọ ahụ ka mmiri ghara ịna-ama ha. Ma ugbu a, ha enweela Ụlọ Nzukọ Alaeze e ji eme mgbakọ. Mgbe a na-arụ ya, ụmụnna iri ise nọ na-ebutu blọk n’ụgbọala mgbe ndị uwe ojii bịara ka ha mara ihe ha na-eme. Mgbe ha hụrụ otú ụmụnna ndị ahụ si jiri obi ụtọ na-arụ ọrụ, ha jara ha mma, nyekwara ha aka butuo blọk ndị ahụ. Ha gwara ha kpọọ ha ma e nwee onye nyere ha nsogbu. Ndị uwe ojii ahụ kwukwara na ha ga-abịa mgbakọ mbụ a ga-anọ n’Ụlọ Nzukọ ahụ nwee ma a rụchaa ya.
O Rere Ígwè Ya
E nwere otu nwanna onye Buruundi aha ya bụ Malachi. Ọ bụ okenye ọgbakọ. Ọ na-akọ ugbo, na-ejikwa ígwè ya ebu ibu. Mgbe a na-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ha, o kpebiri na ya ga na-aga ọrụ ebe ahụ kwa ụbọchị. Ma, olee ebe ọ ga-esi nweta ego ọ ga-eji na-enye ezinụlọ ya nri ọnwa abụọ ahụ a ga-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ, ebe ọ bụ na ọ gaghị na-aga ọrụ nke ya? O rere ígwè ya, kee ego ya abụọ, nye nwunye ya otu ka o were na-azụta nri, were nke fọrọ tinye n’igbe onyinye. Ụmụnna ndị na-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze kụziiri ya ọrụ nke ọma n’ihi otú o si agba mbọ. Mgbe a rụchara Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ, ndị mmadụ malitere nyewe ya ọrụ ịrụ ụlọ n’ihi na a hụrụ na ịrụ ụlọ edoola ya anya. Ọ zụtakwalanụ ígwè ọzọ.
Ha Ji Obi Ụtọ Nyere Ụmụnna Aka
Ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’ime ime Malawi anaghị adị mfe. N’afọ ije ozi gara aga, e nwere ebe a rụrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ụzọ e si aga ebe ahụ mebichara emebi. Ụmụnna anyị na-eji ụgbọala siri ezigbo ike si n’alaka ụlọ ọrụ anyị buru ihe e ji arụ ọrụ na-aga ebe ahụ. Ụmụnna ndị a na-arụrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze a kwuru na obi dị ndị obodo ha ụtọ maka ụlọ a ha na-arụ. Ọtụtụ ndị na-abụghị ụmụnna na-abịa enyere ha aka, ụfọdụ na-arụgide ọrụ chi ejie. Ha na-eso ebu ájá, na-akụwa nkume, na-ebu simenti na gbamgbam. E nwedịrị mgbe ọnụ ọgụgụ ha na-aka nke ụmụnna. Ihe mere ndị obodo a ji tinye aka n’ọrụ a bụ na ha hụrụ otú Ndịàmà Jehova si agba mbọ na-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’ime obodo.
Ụmụ Ha Malitere Ire Swiit
E nwere otu nwanna nwoke ya na nwunye ya bụ ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche na Kot Devụa. Ha na-amụrụ otu nwoke na ndị be ya ihe n’asụsụ Bete. Ụmụ ya dị iri. E mere ndokwa na a ga-enwe mgbakọ mbụ n’asụsụ Bete n’obodo a na-akpọ Daloa n’ọnwa Mee 2013. Nwoke a na ndị ezinụlọ ya chọkwara ịga. Ihe onye ọ bụla ga-akwụ iji gaa ma lọta bụ ihe dị ka narị naịra atọ. Ma, o nweghị ego ọ ga-eji gbaara ụmụ ya niile ụgbọ. Nwoke a chetara ihe ha ga-eme ka ha nweta ego ha ga-eji aga mgbakọ a. O nyere ada ya ihe dị ka otu narị naịra, gwa ya ka o jiri ya malite ime swiit ọ ga na-ere. Mgbe o rere swiit ndị ahụ, o nwetara ego ga-ezuru ya ịga mgbakọ. Nwoke ahụ nyeziri ụmụ ya ndị ọzọ ihe dị ka otu narị naịra otu narị naịra ka ha were na-eme swiit ha ga na-ere iji nweta ego ha ga-eji aga mgbakọ. Ha niile mechara soro ụmụnna gaa mgbakọ ahụ. Obi dị ha ezigbo ụtọ na ha gara mgbakọ ahụ e nwere n’asụsụ ha.